Izindawo ongazihambela wedwa eMelika, e-Asia, e-Oceania noma e-Afrika | Ukuhamba kwe-Absolut
Izindawo ongazihambela wedwa
Ukuthola izindawo ongazihambela wedwa akunzima. Kepha kufanele ucabangele uchungechunge lwezinto eziguqukayo njengokuthi uhambo luni ngokuphepha ngangokunokwenzeka, kwangathi singaba nokwanele ulwazi maqondana nendawo esizoya kuyo futhi, kwezinye izimo, ukuthi basibeke ukugoma kudingekile ukuvakashela indawo esizoya kuyo.
Lokhu akusho ukuthi lezi zinhlobo zohambo kufanele zibe nokunye i-aventura. Eqinisweni, labo abazenzayo bavame ukuzihlola ukuze babone ukuthi basabela kanjani esidingweni sokuzivikela. Abanye, ngakolunye uhlangothi, bathatha lolu hambo njengohlobo lokuzindla komuntu siqu. Kepha, kuzo zonke izimo, kuyi- isipiliyoni esihle. Ngazo zonke lezi zizathu, sizokuphakamisa ezinye zezindawo ezinhle kakhulu ongahamba ngazo wedwa.
1 Izindawo ongahamba kuzo wedwa eMelika
1.1 I-Peru, uhambo oluya ezweni lama-Inca
1.2 IBelize, enye indlela yokuvakashela iCaribbean
1.3 ECanada, izindawo ezinhle ezineqhwa
2 Izindawo ongahamba kuzo e-Asia kuphela
2.1 I-Thailand, i-classic phakathi kwezindawo zokuhamba zedwa
2.2 IVietnam, isisekelo esihlanzekile sase-Asia
3 Izindawo ongahamba kuzo e-Oceania kuphela
3.1 Australia, izwekazi uqobo lwalo
3.2 INew Zealand, isimangaliso semvelo
4 Izindawo ongahamba kuzo wedwa e-Afrika
4.1 Kenya, izwe lamapaki kazwelonke
4.2 IMalawi, umhlaba wechibi elikhulu
Izindawo ongahamba kuzo wedwa eMelika
Izwekazi laseMelika likunikeza izikhala zemvelo ezinkulu futhi ezinhle. Izintaba ezinkulu ziyayiwela, imifula emikhulu iyayinikeza amanzi adingekayo ukulondoloza izimila zayo ezijabulayo futhi amadolobha asendulo ayinika umlando. Njengokungathi lokho bekunganele, ungazi futhi kukho amanye amasiko namasiko. Sizobona ezinye izindawo.
I-Peru, uhambo oluya ezweni lama-Inca
Izwe lase-Andes linenethiwekhi eyamukelekayo yezokuthutha nendawo yokuhlala ezokuvumela ukuthi uhlole indawo yayo ngejubane lakho. Ungavakashela amadolobha afana Cuzco, inhlokodolobha yasendulo Umbuso wama-Inca. Waziwa ngo "IRoma yaseMelika", isikhungo salo esingumlando yi Amagugu Emhlaba.
Amakhilomitha ayikhulu nje ukusuka kuwo unamanxiwa e- Machu Picchu, idolobha lasendulo lamaInca elisukela ngekhulu le-XNUMX futhi elenzayo, kanye neSigodi Esingcwele ezinyaweni zalo nasezintabeni ezizungezile, okubizwa ngokuthi Indawo engcwele yomlando kaMachu Picchu, uvotele esinye sezimangaliso eziyisikhombisa zomhlaba wanamuhla.
Ngokuqondile vakashela i- Izintaba ze-Andes, jabulela okuyigugu Amabhishi aseMáncora noma ubheke ukuhaha nokukhanga Imigqa yeNazca, ngama-geoglyphs awo amakhulu angalinganisa amamitha angamakhulu amathathu, ngezinye izinto ongazenza ePeru enhle.
IBelize, enye indlela yokuvakashela iCaribbean
EMelika Ephakathi, ungavakashela okukhulu I-México, ngezinsalela zayo ezinhle zama-Aztec noma eziyigugu Cuba, lapho impilo ibonakala ima khona. Kodwa-ke, siphakamisa ukuthi ube yindawo ongahamba kuyo wedwa iBelize ngoba yizwe elincane elihle njengeledlule kepha laziwa kancane.
Kuyo ungajabulela amabhishi amahle njengaleli le- Split, zama ukudla komgwaqo kwesitayela seCreole bese ulalela reggae kuma-nightclub abo. Ngakolunye uhlangothi, uma uthanda ukudilika nokuzijabulisa, ungazijwayeza ukubabaza ICaye Caulker Marine Reserve eduze kwezimfudu noshaka.
Kepha awukwazi ukushiya iBelize ngaphandle kokubona umxhwele I-Blue Hole enhle, okuphambi kwamaphethelo alo. Ukulinganisa ngamamitha angamakhulu amathathu ububanzi nokujula okuyikhulu namashumi amabili, lolu hlobo lomhume olubheke phezulu lolo olukhulu kunawo wonke emhlabeni. Futhi kuyingxenye ye- Uhlelo lweBelize Barrier Reef Reserve, okuyindawo eyiGugu Lomhlaba.
ECanada, izindawo ezinhle ezineqhwa
Uma uhambela eCanada wedwa, uzothola Imvelo enkazimulweni yayo yonke. Okokuqala, ungabona umxhwele Izimpophoma ZaseNiagara, emngceleni ne-United States. Kepha futhi okungaziwa kancane kwe Montmorency, ngamamitha angamashumi amathathu ukuphakama kunalawo angaphambilini futhi aqandisa ebusika.
Ungavakashela namachibi amakhulu njenge Peyto, namanzi alo oluluhlaza, noma i- Louise, ekahle nge-kayaking. Kokubili kuhlelo lwe- IBanff National Park, ehlanganisa amaRockies aseCanada.
Ngasenyakatho kwalokhu kunenye ipaki kazwelonke, leyo ye Jasper, futhi namachibi amakhulu, izimpophoma, izintaba ezihlaba umxhwele futhi ikakhulukazi izinguzunga zeqhwa ezifana nalezi ze Athabasca. Kepha qaphela ngoba kuyindawo yebhere iGrizzly.
Konke lokhu ngaphandle kokukhohlwa amadolobha afana Quebec, nenqaba yayo ehlaba umxhwele iFrontenac; Ottawa, nomsele wayo weRideau, lapho ongashushuluza khona ebusika, noma Toronto, ne-CN tower yayo ezacile, engaphezulu kwamamitha angamakhulu amahlanu ukuphakama, okuyindawo ephakeme kakhulu eMelika.
Izindawo ongahamba kuzo e-Asia kuphela
Izwekazi lase-Asia likunikeza nokuhlangenwe nakho okungapheli, ngakunye okungavamile. Lokhu kusuka kokuhle Amabhishi aseMaldives kuze kube ngamasiko ezinkulungwane zeminyaka India o China, bedlula emapaki amakhulu emvelo e- i-Sri Lanka. Kepha sikhethe ukukunikeza ezinye izindlela.
I-Thailand, i-classic phakathi kwezindawo zokuhamba zedwa
Waziwa ngokuthi "Izwe lamathempeli", I-Thailand iyinto yakudala phakathi kwabahambi bodwa. Kepha awuzukuthola kuphela ingokomoya ezweni lase-Asia. Ilungiselelwe ngokuphelele ezokuvakasha futhi lokhu kusho ukuxhumana kahle nengqalasizinda yamahhotela.
Ungaqala uhambo lwakho ngokwazi Bangkok, ngezakhe Isigodlo Esikhulu Sasebukhosini, it Ithempeli lase-Emerald Buddha kanye nalo Ithempeli leDawn, futhi uhamba ngeziteshi zawo eziningi. Kepha lapho-ke ungahamba uye edolobheni lase Chang mai, lapho-ke kungekho ukusweleka kokwakhiwa kwezenkolo njenge Wat Phrathat Doi Suthep. Kepha thatha ithuba lokuhlala kwakho edolobheni ukuze uthathe uhambo lwezindlovu ezintabeni uhlangana nezizwe zomdabu ezinjengalezo ze Karen igagasi le ULisu. Ngokuqondile endaweni yiyona Doi inthanon, intaba ephakeme kunazo zonke ezweni.
Kodwa-ke, uma ukhetha idolobha elinama-bohemian amaningi, vakashela I-Pai. Kepha ngaphezu kwakho konke, yazi ifayili le- iziqhingi zase thailand, ngamabhishi ayo amahle anamanzi acwebezelayo. Ziyizindawo zabavakashi futhi, ngakho-ke, zilungiselelwe imisebenzi efana ne-scuba diving kepha futhi zigcwele ngokweqile. Uma ukhetha ukuthula okungaphezulu, vakashela okunye okungadumile kangako UKoh Phayam o UKoh Kood.
IVietnam, isisekelo esihlanzekile sase-Asia
Okukhulu njengoba kungaziwa kangako, iVietnam iyindawo yokuhamba wedwa ekuyisa endaweni eyi-Asia. Uma ufuna ukuzwa impilo yamakilasi athandwayo ezwekazi, yindawo engcono kakhulu yokulahleka.
Iqala ngodaba lwayo, Hanoi, sivakashela izimakethe zayo futhi sihamba esidumile Umgwaqo uLé Duan. Kepha kwenze ngokucophelela ngoba, yize kuncane, kubuye kube umthambo omkhulu wesitimela wedolobha. Ungathatha futhi ithuba ukubona umbukiso we onodoli bamanzi, isiko elineminyaka eyinkulungwane ubudala eVietnam.
Ungavakashela futhi idolobha lase I-Sapa, lapho imizila yokuqwala izintaba iqala khona ngezintaba ezinyathelisiwe ezizungezile. Futhi, ngemuva kokubona iziqongo, hamba uye ku- i-halong bay, nezimbangi zayo ezinkulu ezinamakhasi amakhulu kanye nohlaza lwazo oluhle, bese uluhamba ngesikebhe esivamile. Uma uthanda ulwandle, vakashela Nha Trang, lapho unakho okuhle khona, konke kunesihlabathi esihle namanzi aluhlaza. Ukusuka lapho, ungahamba nge-gondola egijima amamitha ayizinkulungwane ezintathu ngaphezu kolwandle uye e- Isiqhingi saseHon Tre.
Kodwa-ke, iVietnam, ngaphezu kwakho konke, "Izwe lama-flavour ayinkulungwane", indawo okuyiwa kuyo abathandi bokupheka. Uma ungazama, ungalahleka ezimakethe zayo eziningi lapho izolungiswa khona izitsha ezingavamile kakhulu okwamanje.
Izindawo ongahamba kuzo e-Oceania kuphela
Yize kunamazwe amaningi amancane e-Oceania afana I-Marshall Islands, IPapua New Guinea o Samoa, izwekazi lase-oceanic lakhiwa kakhulu i-Australia neNew Zealand futhi zombili ziphakathi kwezindawo ezinhle kakhulu zokuhamba wedwa.
Australia, izwekazi uqobo lwalo
Kunzima ukuphakamisa ukuthi wenzeni e-Australia, ngoba cishe iyizwekazi lodwa. Kepha kubalulekile ukuthi usondele endaweni ye Queensland futhi uvakashele i- IGreat Barriers Reef, indawo engamakhilomitha acishe ibe yizinkulungwane ezimbili okuyindawo eyiGugu Lomhlaba.
IGreat Barriers Reef
Uma ukhetha indawo eyomile, i- I-Uluru-Kata Tjuta National Park, yenani elikhulu elingokomoya kwabomdabu ngoba kulo kuyamangalisa ukukhweza uluru ngombala wayo obomvu, i-monolith engcwele kubo. Ngakolunye uhlangothi, uma uthanda ukuntweza phezu kwamanzi, ungayeki ukuhambela i- ibhondi lolwandle, inganekwane kubalandeli balo mdlalo. Kepha ungakhohlwa ukuvakashela i- ihlathi lemvula lase daintree, okuyindawo futhi eyiGugu Lomhlaba.
Ngokuqondene nemizi, Melbourne yileyo yempilo emgwaqweni, ngenkathi Sidney, nesakhiwo sayo esibabazekayo se-Opera, sihlakaniphe kakhulu. Ngokwakhe Fremantle y Perth Bangama-bohemian amaningi futhi bakunikeza izindawo zokudlela ezingapheli zochwepheshe nemigoqo ye-cocktail yawo wonke umuntu.
INew Zealand, isimangaliso semvelo
Uma i-Australia inezimangaliso zemvelo, iNew Zealand, incane kakhulu, isimanga sangempela. Kangangokuthi singasho ukuthi, ngezinga elincane, likwenzile zonke izinhlobo zamathafa emhlabeni. Njengesibonelo salokhu, sizokhuluma nge- Izintaba-mlilo zaseTongarino, the U-Abel Tasman amabhishi, the izintaba zezintaba eziseningizimu, the ichibi taupo noma i IMilford Sound fjords.
Kepha, uma ufuna ukulahleka emadolobheni ayo, Wellington, inhlokodolobha, ikunikeza Te Papa Tongarewa o Museum of New Zealand, lapho ungafunda khona ngomlando namasiko alelizwe. Naye intaba i-victoria, oyithola ku-funicular futhi ekunikeza ukubukwa okuhle kwe-panoramic, kanye ne lolwandle lwase-oriental bay.
Ngakolunye uhlangothi, ku Auckland, idolobha elikhulu kunawo wonke ezweni, unezikhumbuzo ezifana ne- Isikhumulo semikhumbi, esinye sezimpawu zayo; i I-Auckland War Memorial Museum, isakhiwo esimangalisayo se-neoclassical, noma esihle isiteshi sesitimela. Kepha ngaphezu kwakho konke, ungakhohlwa ukuhamba kuyo Queen Street, vakashela izimakethe zobuciko ze I-Aotea Square futhi ngizokhuphukela ku Umbhoshongo wesibhakabhaka, okuwumbhoshongo omude kunayo yonke iNingizimu Nenkabazwe futhi, ngokunengqondo, okukunikeza ukubukwa okuhle kwedolobha.
I-Auckland War Memorial Museum
Izindawo ongahamba kuzo wedwa e-Afrika
Akudingeki ukuthi sikutshele ngokuthi likhulu kangakanani izwekazi lase-Afrika. Kepha sizokukhumbuza ukuthi, ngenxa yalesi sizathu, ungathola konke okukukho: izingwadule ezinkulu, izindawo ezinotshani obuluhlaza nolwandle oluhlaba umxhwele namachibi. Kepha futhi amazwe amaningi, ngeshwa, ahlala ebuphofu ngokuphelele namanye asesimanjemanje.
Ngaphandle kwezizwe ezisenyakatho njenge I-Tunisia o Morocco, Cishe ezaseYurophu, sikweluleka ngokuthi, uma uzohambela e-Afrika ejulile, ukwenze konke lokho izifunda ezihleliwe. Ngaphandle kwalokho, ngaphandle kokuthi ungumhloli weqiniso, ungahle ube nezingqinamba. Kunoma ikuphi, sizokunikeza imibono emibili.
Kenya, izwe lamapaki kazwelonke
Ngemuva kokuvakashela ku- Nairobi, inhlokodolobha, i UMnyuziyamu Kazwelonke neqoqo layo elimangalisayo lobuciko be-rock kanye ne Umnyuziyamu wendlu kaKaren Blixen, umbhali odumile we 'Out of Africa', sikweluleka ukuthi ubone i- amapaki wemvelo kusuka eKenya.
Kuhlelo lwe UMasai Mara Ngeke ubone kuphela izimila ezinhle nezilwane zasendle kepha uzokwazi nokuhlangana nezizwe zamaMaasai futhi ufunde amasiko azo. Kuhlelo lwe Amboseli uzobona kude le I-Kilimanjaro, intaba ephakeme kunazo zonke e-Afrika. Kuhlelo ichibi nukuru uzokujabulela esinye sezifunda ezibaluleke kakhulu ze-ornithological emhlabeni. Noma, ekugcineni, kufayela le- ISamburu Reserve uzobona izindlulamithi ezifakiwe nezidube ezinomona futhi ku- I-Tsavo Occidental park izingwenya nezimvubu.
IMasai Mara Natural Park
IMalawi, umhlaba wechibi elikhulu
Ukunikezwa okuhluke kakhulu kunikezwa yileli lizwe laseNingizimu-mpumalanga ye-Afrika. Ngoba konke okukuye kuxhumene nobukhulu bakhe IChibi iMalawi noma iNyasa, enamakhilomitha acishe abe ngamakhulu ayisithupha ubude namashumi ayisikhombisa ububanzi. Emabhange alo uzothola eziningi izindawo zokungcebeleka zilungiselelwe ezokuvakasha nalapho ungaphumula khona.
Kepha ungabamba iqhaza ku-safari ngokusebenzisa i- ILiwonde National Park; hlola amadolobhana endabuko we isiqhingi se-likoma lokho futhi kukunikeza ukumangala nge-cathedral yalo enhle kakhulu; vakashela i- Iziqiwi zemvelo iMajete neNkhotakota noma ukhuphukele ku intaba iMulanje, elizungezwe izigodi eziluhlaza nezimpophoma.
Sengiphetha, sikukhombise ezinye zezindawo ezingcono kakhulu zokuhamba wedwa emhlabeni. Sishiye i- Amazwe aseYurophu kwesinye isikhathi sokuthandwa kakhulu. Kepha eziningi zazo futhi ziyizindawo ezinhle ongahamba ngazo wedwa. Noma kunjalo, awufuni ukwazi labo esikweluleke ngabo?
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » Izindawo ongazihambela wedwa
Amasiko aseDashi ngoKhisimusi
Yini ongayibona eNorway